"Mitsangàna" avy amin'i Katy Perry ho an'ny Apple Music | Avy amin'ny mac aho
"Rise", ilay tokana vaovao avy amin'i Katy Perry ho an'ny Apple Music irery
Laura varo | | Apple Music, About us
Rehefa afaka roa taona, nanaitra ny mpanara-dia azy i Katy Perry tamin'ny fanehoana azy ny tokana vaovao «Mitsangàna» ho an'ny Apple Music manokana. Ny tokana dia voafidy hisolo tena ny Lalao Olaimpika Rio de Janeiro 2016 ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy amin'ny fantsona fizarana niomerika an'i Apple.
Ny exclusivity nomena an'i Apple dia niteraka fifandirana eo amin'ireo mpanaraka an'ny artista. "Rise" dia re ankehitriny ao amin'ny Apple Music ary azo alaina amin'ny alàlan'ny iTunes, na dia afaka mahita an'io aza isika tsy ho ela ao amin'ny Youtube miaraka amin'ny horonan-tsary ofisialy.
Katy Perry dia nanolotra ny "Rise" ho mpitovo tokana manokana izay manambara ny lafiny lalina indrindra amin'ny maha-mpamoron-kira sy ny fiahiany ny firaisankina.
Ity dia hira iray izay efa an-taonany maro tato an-tsaiko, ary nipoitra tampoka ihany tamin'ny farany. Nahazo aingam-panahy aho hamita dieny izao fa tsy hitahiry izany ho an'ny rakikiriko manaraka satria izao dia mila izao tontolo izao hiaraka isika izao »
Ity exclusivity ity dia mampiseho indray ny fahavononan'ny finiavana tian'i Apple apetraka Apple Music ho mpifaninana amin'ny sehatry ny mozika an-tserasera, indrindra avy amin'ny Spotify. Amin'ity hetsika ity dia hahatratra ny orinasa manintona mpankafy maro an'ny artista.
Mbola tsy fantatra ny fe-potoana nifanarahana Katy Perry irery miaraka amin'ny Apple Music. Na dia samy tsy nisy nanapa-kevitra momba izany aza ny roa tonta, tsy vao sambany nanaiky ny handoa vola amin'ny famokarana atiny sasany ho an'ny exclusivity i Apple, toy ny efa niseho tamin'ny «World Tour 1989 ″ avy amin'i Taylor Swift.
Miresaka ny "Mitsangàna" a fihirana noho ny fandresena ny tahotra ary tandindon'ny firaisan-kina sy ny fivoaran'ny zanak'olombelona.
“Fantatro fa miaraka afaka mandresy ny tahotra isika, eto amin'ny firenentsika sy manerantany. Tsy afaka mieritreritra ohatra tsara kokoa noho ny olympiana hiangona ao Rio aho, miaraka amin'ny herin'izy ireo sy ny herimpon'izy ireo hampahatsiahy antsika fa afaka miara-mivory daholo isika ary manan-tsafidy mba ho tsara indrindra. Manantena aho fa ity hira ity dia mitaona antsika hanasitrana, hiray hina ary hiroso miaraka. Voninahitra ho ahy ny NBC nifidy ny hampiasa ny "Rise" ho hira faneva alohan'ny sy mandritra ny Lalao Rio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » "Rise", ilay tokana vaovao avy amin'i Katy Perry ho an'ny Apple Music irery
Apple manavao ny fampifanarahana RAW ny fakan-tsary niomerika 6.20
Ny "MacBook" an'i Xiaomi dia miha-akaiky hatrany